Tuesday January 29, 2019 - 13:10:31 in Wararka by Abdi A.
Sheekada ayaa bilawgeedu waxey aheyd wada sheekeysi kulan casho ah. Ma garan karo sida uu mawduucu u bilawday, ha yeeshee innagoo kasii baxeyna goobtii maqaayadda, saaxiibadeey ayaa soo hadal qaadey magaca Maxamuud Mataan, kaas oo la daldaley sanadkii 1952-dii, markaa - anigu indhaheyga waxey ku dhaygageen saaxiibadey, halkaas ayeynu ka amba qaadnay sheekadan qotada dheer, ee aadka u qalafsan - maxaa xiga markaa.
Sheekada Mataan ayaa ku bilaabatey fiidka maalintii ay ku beegneyd 6-da March, 1952-dii, markii la dilay haweeney ka shaqeysata dukaankeeda oo la yidhaahdo, Lily Volpert, kaasoo ku yaaley Butetown, Cardiff. Ciidanka booliiska ayaa durbadiiba markii uu falka dhacay joojiyey dhammaan maraakiibtii ka baxeysay dekedda, waxey bilaabeen iney ugaarsadaan gacan ku dhiiglihii.
Soomaaligii ugu horeeyey ee yimid Cardiff waxaa la diiwaan galiyey inta la og yahay qarnigii labaatanaad, ka gadaal markii la furey Kanaalka Suez. Ha yeeshee way yaraayeen illaa iyo intii laga soo gaadhayey 1914-kii, markii uu bilawday dagaalkii koowaad ee dunida, waxaa kordhay baahida loo qabo dadka xoogga leh, si loogga faa'iideysto xooggooda shaqooyinka adeegga ku saleysan.
Raggani waxey ahaayeen dad reer guuraa ah, wax dhib ah kuma aysan qabin safarka ku saleysan guur guuridda. Waxaa jirta maah maah Soomaaliyeed oo oraneysa "Nimaan dhul marin, dhaayo ma leh,"
Mahamed Muse Warsame oo Cardiff ku nool
Qof u dhashay dalka Jamica, oo la yidhaahdo Harold Cover, ayaa siiyey booliiska warbixin aroortii xigtay, isagoo sheegay in uu arkey nin Soomaali ah oo kasii baxaya goobta uu falka dilka ka dhacay ee dukaanka Volpert - kaas oo lahaa ilig dahab ah, koofi iyo jaakatna aan xirneyn.
Mataan waxaa la xirey markii Cover uu siiyey booliiska warbixin labaad, taasoo ka hor imaneysa tiisii koobaad - qoyskii ay ka dhalatey Volpert ayaa balan qaadey £200 oo abaalmarin ah ciddii soo gudbiso warka arrintaasi la xidhiidha.
Markii la gaarey maxkamaddii, Cover wuxuu sheegay inuu arkey Mataan oo kasii baxaya dukaanka markii ay saacadu aheyd 8.15 fiidnimo.
Qoys ku noolaa Tiger Bay, 1939
Harold Cover, oo ahaa ninkii ku marqaati furay Mataan, ayaa muddo kadib la xidhey, isagoo lagu xukumay xabsi daa'in, ka dib markii lagu soo eedeeyey inuu isku dayey inuu gabadhiisa qoorta ka gooyo isagoo adeegsanaya sakiin, halka Taher Gass, oo ahaa isagana ninkii lagu tilmaamay inuu ku sugnaa dukaanka uu dilka ka dhacay, lagu soo oogay dambi ah inuu qof toorrey ku dilay, balse wax dambi waa lagu waayay.
Dukaanka uu dilka ka dhacay
Maxamuud Mataan, oo si caddaaalad daro ah loo daldalay